Izvozvi izvi zvinenge zvichinangana nomutemo noumboo hwacho. Kutaura vangataure zvavo saizvozvo asi hazvina chazvinobatsira.
Itii kune vane mwoyo unotya, “Simbai mwoyo, regai kutya. Tarirai muone, Mwari wenyu ari kuuya kuzotsividza nokutsividza kwaMwari, achizogadziridza zvamakakanganisirwa, achauya okununurai.”
Izvozvi ndizvo zvakafira Kristu akava mupenyuzve kuti ave Tenzi wavakafa navapenyu.
Handiti ndakuudza kuti shinga utsunge mwoyo. Usambotya zvako, kana kuzeza nokuti Tenzi, Mwari wako achava newe kwose kwauchaenda.”
Munamato womunhu anovimba naMwari zvakanyanya TENZI ndiye chiedza changu noruponeso rwangu. Ndiani wandingatye? Paupenyu hwangu, TENZI ndiye diziro rangu. Ndiani wandingatye?
TENZI zvaari kudivi kwangu handityi, munhu angandiitei.
 nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba, kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.
Kuna vakachena, zvose zvakachena asi kuno munhu ane tsika dzakaora asingatendi hapana chakachena. Pfungwa dzavo chaidzo nehana dzavo dzakaodzwa.
Siyanai nouipi hupi nohupi zvahwo.
“Ndinodaro nokuti ndudzi dzavanhu dzamuri kuzodzinga munyika dzadzo dzinovimba navanofembera vachiita zvemaminimini nevanoshopera, asi imi Tenzi Mwari wenyu haakubvumidzei kuita izvozvo.
 “Kana mweya wakaipa wabuda mumunhu, unopfuura nomunzvimbo dzisina mvura uchitsvaka pokuzororera, asi unopashaya. Zvino unozoti, regai ndidzokere kumba kwangu kwandakabva. Kana wasvika unosvikoiwana isina chirimo yakatsvairwa yakanyatsorongedzwa. Ipapo unobva waenda wondounza mimwe mweya minomwe yakaipa kupinda iwo. Inopinda yogara imomo. Mhedziso yomunhu iyeyo inoipa kupinda pokutanga. Ndizvo zvichaitika kuchizvarwa chino ichi chakaipa.”
 Naizvozvo fambai makachenjera kwete savanhu vasina kungwara asi savanhu vakangwara. Nyatsoshandisai nguva yenyu nokuti kwaipa mazuva ano.